शिव परियारले 'वान्स मोर' पाएको १४ वर्ष पुरानो गजल :: Setopati
शिव परियारले 'वान्स मोर' पाएको १४ वर्ष पुरानो गजल
प्रभाकर गौतम काठमाडौं, असोज २०
जनक पौडेल। तस्बिरः प्रभाकर गौतम/सेतोपाटी
करिब १४ वर्षअघि राष्ट्रिय सभागृहमा 'तीन दिने राष्ट्रिय गजल महोत्सव' भएको थियो। आयोजक थियो, अनाम मण्डली।
महोत्सवमा गायक शिव परियारले एउटा नयाँ गजल गाए। उनले गाएर सकिँदा नसकिँदै स्रोता–दर्शकबाट सामूहिक आवाज आयो, 'वान्स मोर।'
स्रोता–दर्शकको मन राख्न शिवले फेरि गुनगुनाए–
अलिकति नजर तिम्रो झुकाएर आऊ
बादलजस्तो कालो केश फुकाएर आऊ...
राष्ट्रिय गजल महोत्सवलाई विशेष बनाउन अनाम मण्डली टोलीले गजल वाचनसँगै केही गजल संगीतबद्ध गरेर प्रस्तुत गर्ने तयारी गरेको थियो। यसक्रममा गजलकार जनक पौडेलको रचना शिवको हातमा परेको थियो।
त्यो समय जनक यसरी सम्झिन्छन्, 'शिव परियार बागबजारमा संगीत सिकाउँथे। अनाम मण्डलीका साथीहरूसँग उनको राम्रै चिनजान थियो। हामीले केही गजल छानेर गायक-संगीतकारलाई दिएका थियौं। मेरो रचना शिवको भागमा पर्‍यो।'
दमक, झापा छँदै जनक २०५६ सालतिरदेखि 'पूर्वाञ्चल गजल मञ्च' मा सक्रिय थिए। २०६० तिर उनको गजल संग्रह 'एउटा कथा' प्रकाशन भएको थियो। 'अलिकति नजर' त्यही एउटा कथाभित्रको एउटा गजल थियो।
जनकले शिवलाई किताबै दिएर मन परेको गजल छान्ने छुट दिएका थिए। शिव आफैंले छान्ने क्रममा पाँच शेरको गजलमध्ये तीन शेरमात्र संगीतबद्ध गरेको जनकले बताए।
उनले भने, 'संयोगवश शिवलाई त्यही गजल मनपर्‍यो र स्रोताहरूले पनि मनपराइ दिनुभयो।'
राष्ट्रिय गजल महोत्सवकै लागि भनेर रेकर्ड भएको यो गजल कार्यक्रममा लाइभ गाइनुअघि जनकले पनि सुनेका थिएनन्। उनलाई शिवले गजल 'दाम्मी बन्दैछ' सम्म भनेका थिए।
महोत्सवमा गाएपछि अलिकति नजर तिम्रो रिबेल क्रिएसन्सबाट शिवले निकालेको एल्बममा 'स्वयं' मा समावेश भयो। विस्तारै एफएम रेडियोहरूमा बज्न थाल्यो। गजल छोटो समयमै टप टेनभित्र प्रवेश गर्दै शीर्ष स्थानसमेत ओगट्न सफल भयो।
त्यसबेला एउटा एल्बमका एक वा दुई गीतका मात्र भिडिओ बन्थे। संयोगले यही गजलको भिडिओ बन्यो। भिडिओ बनेपछि अलिकति नजर तिम्रो झन् हिट भयो।
जनक २०६५ सालदेखि कान्तिपुर टेलिभिजनमा काम गर्न थाले। उनले काम सुरू गर्नु र आफ्नो गजलको म्युजिक भिडिओ बन्ने समय उस्तैउस्तै भइदियो।
त्यतिबेला कान्तिपुर टेलिभिजनमा म्युजिक भिडिओ प्रसारण हुनु ठूलो कुरा मानिन्थ्यो। नियमित म्युजिक भिडिओ बज्ने कार्यक्रमहरूमा अलिकति नजरले ठाउँ पाउने नै भयो। त्यसबाहेक खाली समयमा 'फिलर' का रूपमा पनि भिडिओले ठाउँ पाउन थाल्यो।
जनकले भने, 'ओहो! जनकको गीत भनेर साथीहरूले माया गरेर फिलरका रूपमा पनि धेरै पटक मेरो गजललाई ठाउँ दिए। दिनमा एकपटक कुनै न कुनै समयमा म्युजिक भिडिओ प्रसारण भयो।'
त्यसले पनि अलिकति नजरको चर्चालाई सहयोग मिलेको जनक बताउँछन्।
उनका अनुसार त्यसैबीच गायक शिव र रिबेल क्रिएसन्सबीच कुनै कारण विशेषले सम्झौता टुट्यो र भिडिओ प्रसारण रोकियो। चर्चा पाइरहेका बेला त्यसले अलिकति नजरको निरन्तरतामा अवरोध आएको पनि उनले बताए।
अहिले युट्युबमा उपलब्ध अलिकति नजरको भिडिओ रिबेल क्रिएसन्सकै अफिसियल इन्टरटेनमेन्ट च्यानलमा अपलोड गरिएको छ। १४ वर्ष पुरानो भए पनि यो भिडिओ अढाइ वर्षअघि मात्र अपलोड भएको देखिन्छ।
अलिकति नजर तिम्रो गाउने बेला शिव परियार संगीत क्षेत्रमा अहिलेजस्तो स्थापित भइसकेका थिएनन्। यसले शिवको करिअरमै सकारात्मक भूमिका निर्वाह गरेको थियो। त्यसयता शिवले सयौं गीत गाइसके। आफ्नो चर्चा र क्षमता पनि बढाइसके। तर जनकका लागि यो पहिलो र अन्तिम रेकर्डेड गजलसरह भएको छ।
जनकका अनुसार उनी सानैदेखि घर, खेतबारी वा कोठामा जहाँ पनि, जतिबेला पनि गुनगुनाइ रहन्थे। अरूका गीत मात्र नभएर आफैं लय बनाइ शब्द थप्दै गाउँथे।
गायक बन्ने सपना देखे पनि उनी लेखन हुँदै पत्रकारितामा लागे।
'गाउने रहर अझै बाँकी छ जुन म गजल प्रस्तुतिमार्फत पूरा गरिरहेको छु। अरूले गजल वाचन गर्छन्, म गुन्गुनाउँदै गजल सुनाउँछु,' उनले भने।
जनकको गजल सुनाउने आफ्नै 'तरन्नुम' शैली छ।
संगीतप्रति मोह भएका उनकाे अलिकति नजरपछि अर्को गीत/गजल रेकर्ड किन नभएको?
'नजर तिम्रो हिट भएपछि थप गजल रेकर्ड होस् भन्ने चाहना हुने नै भयो। लेख्छु भन्ने थाहा भएकाले केहीसँग गीत बनाम् भन्ने कुरा पनि चल्यो। तर त्यो कुरा गम्भीर रूपमा अघि बढेन।'
एक दशकभन्दा बढी समय टेलिभिजन र अनलाइन मिडियामा काम गरेका उनका लागि पत्रकारिता पहिलो प्राथमिकता थियो। अर्कोतिर, गीतकार बन्न कि गायक/संगीतकारसँग हिमचिम बढाउन समय दिनुपर्ने हुन्थ्यो कि आफैं पैसा खर्च गरेर रेकर्ड गराउनु पर्थ्यो। तर आफ्नो स्वभावले त्यसरी रेकर्ड गराउन मन नलागेको उनको भनाइ छ।
'लेख्नबाहेक रेकर्ड गराउन समय र श्रम नखर्चेकाले पनि होला,' उनले हाँस्दै भने, 'शिवले समेत त्यसपछि मसँग अर्को रचना मागेनन्।'
यो गजल लेख्ने बेला जनक करिब बीस वर्षका थिए। कलेज पढ्ने उमेरमा उनको मनमा कसैप्रति प्रेम पलाएको थियो।
'त्यही प्रेमभाव पोखिएको अलिकति नजर तिम्रो वास्तविक पात्रलाई कल्पेर लेखेको थिएँ। यसमा पोखिएको भाव कोरा कल्पना थिएन,' उनले भने।
संगीत र आवाजमार्फत शिवले जनकको त्यो रोमान्टिक भावलाई आफ्नै शैलीमा अभिव्यक्त गरिदिए।
अलिकति नजर तिम्रोको भिडिओमा आएका कमेन्टमा पनि धेरैले यसको रोमान्टिक पक्षलाई मन पराएको बताएका छन्।
आफ्नै जीवनको कुनै क्षणमा उब्जेका भाव समेटिएको यो गजल सुन्दा जनक आज पनि रोमाञ्चित हुन्छन्। तर समय र उमेरले उनलाई आफ्नै रचनाप्रति आलोचनात्मक पनि बनाएको रहेछ।
जनक हाल समसामयिक मुद्दामा केन्द्रित 'ऐना' कार्यक्रमका कार्यकारी निर्माता हुन्। ऐनाको दोस्रो सिजनको तयारीमा लागिसकेका छन्। व्यवसायिक गीत रेकर्ड नभए पनि जनकको रचनामा ऐनाको पहिलो सिजनको घरेलु हिंसासम्बन्धी भागमा 'सदियौंदेखिको पीडा' बोलको गीत रेकर्ड भएको थियो। यसमा गायिका अस्मिता परियारले आवाज दिएकी छन्।
ऐनाका लागि लेखेको रचनामा उनको सामाजिक सरोकार झल्किन्छ। तर अलिकति नजर तिम्रो भावनात्मक गीत हो। यसले 'प्रेमिकालाई लजाउँदै, नजर झुकाउँदै आऊ' भन्छ।
'त्यस बेलाको मेरो चेतनाले बोकेको आग्रह वा परिकल्पना हो। तर आज मेरी प्रेमिका लुकेर वा झुकेर आउने खालको होस् भन्ने चाहँदिनँ,' उनले भने, 'कुनै पनि प्रेममा पर्ने महिला बराबर हैसियतका साथ आऊन् भन्ने लाग्छ।'
यो उनलाई लागेको मात्र होइन। यो गीत चर्चामा आएपछि उनलाई केही महिला साथीहरूले पनि सोधेका थिए, 'हामी किन नजर झुकाएर आउने? ठाडै नजर जुधाएर आउँदा हुँदैन?'
'यो गजल सुन्दा म नोस्टाल्जिक हुन्छु। एउटै मात्र गजल पनि हिट भयो भनेर दंग पनि पर्छु,' उनले भने, 'तर सन्तुष्ट हुन सक्दिनँ। मैले हिजो कोरेका आफ्नै शब्दसँग अहिलेको मेरो सोच र मेरो समाजको चेतना मिल्दैन। हरेक सर्जकमा यस्तो आत्मआलोचना जरुरी छ।'
गीतको कथा स्तम्भका अन्य स्टोरीहरूः
२९ वर्षदेखि 'सिमसिमे पानीमा' गीतसँग प्रतिस्पर्धा गर्दै गायिका रेखा शाह (भिडिओ)
गायक लोचन रिजालले त्रिपुरेश्वरको साँघुरो टहरामा जन्माएको यो गीत
यसरी हिट भयो 'पर्ख पर्ख मायालु', संगीतकार शर्मा भने आज पनि मागिरहन्छन् माफी
प्रकाशित मिति: बुधबार, असोज २०, २०७८, २१:१६:००